Skal International Goa dia nantsoina hoe Skal Club Of The Year 2020 | Travel Associations News
Home » Lahatsoratra » Travel Associations News » Skal International Goa dia nantsoina hoe Skal Club Of The Year 2020
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • India Travel News • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Other • Olona manao vaovao • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Vaovao momba ny fizahantany • Travel Associations News • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News
Skal International Goa dia nantsoina hoe Skal Club Of The Year 2020
The 81st Ny Skal World Congress dia notontosaina tamin'ny 17th Oktobra 2020 aiza Skal International Goa (691) dia nambara ho ny tsara indrindra amin'ny Skal Club Of The Year 2020 tsara indrindra teo amin'ireo klioba 350 + any amin'ny firenena 87 manerana an'izao tontolo izao. Ny fizarana ny loka dia misy fizarana roa - ny vato voalohany isaky ny klioba ary ny faharoa avy amin'ny Vondron'ny Mpitsara ny Komity Mpanatanteraka. Ny vato avy amin'ny klioba dia maneho ny 60% amin'ny vato total & ny vato 40% sisa dia avy amin'ny tontolon'ny mpitsara komity mpanatanteraka.
Ireo klioba nahazo vato betsaka indrindra dia nantsoina hoe "Skal Club Of The Year" & mandray ny Trophy Fahatsarana Michael O'Flynn, ary koa fisoratana anarana indroa maimaimpoana ho an'ny Kongresin'ny Skal World 2021. Ny fanambarana natao tao amin'ny Kaongresy Manerantany dia nahatonga izany fotoana hireharehany izany ho an'ny Skal International Goa (691) sy India ihany koa.
Mandritra io fihaonana io ihany Sk. Mario Sequeira dia notendren'ny Skal International ho an'ny mari-pankasitrahana manokana an'ny filoha tamin'ny alàlan'ny serivisy ho an'ny Skal International India. Skal International Goa (691) dia nahazo ihany koa ny loka volamena ho an'ny fitomboan'ny mpikambana ao amin'ny Net amin'ny taona 2019. Ny Club dia nampitombo ny mpikambana ao aminy hatramin'ny 26% hatramin'ny taon-dasa ary mitombo hatrany amin'ny maha-mpikambana azy tsara.
Fanehoan-kevitra momba ny loka Pr. Ernest Dias dia nilaza fa "Ny ekipa iray manontolo ao amin'ny Komity Mpanatanteraka dia niasa tsy nisy fiasa nanatratra tanjona voafaritra tsara ny fahazoana ny Skal Club Of The Year Award. Fotoana mirehareha tokoa ho antsika rehetra ao amin'ny Skal Goa & voatahy tokoa aho hitarika ity Club mavitrika sy mavitrika ity ". Ny Club dia manana komity mpanatanteraka mavitrika izay tsy mampaninona azy ny mandeha lavitra mba hahatratrarana zavatra lehibe ho an'ny Club sy ireo mpikambana ato amintsika. Nahitam-bokany ny asa mafy nataon'izy ireo ary manana drafitra lehibe ho an'ny ho avy izahay.
Ny zava-mitranga dia mihamitombo hatrany ary miaraka amina maso ny pitsopitsony sy ny zava-bita tsara indrindra izay atolotray miaraka amin'ireo mpanohana anay dia tsy maintsy manatrika hetsika isaky ny volana. Ny fikarakarana ireo mpikambana sy fiarahamonintsika no zava-dehibe indrindra. Izy ireo no Skalleagues & namantsika ary miasa miaraka amin'ny Oneness & Unity izahay ho fanatsarana ny fizahantany any Goa / India / World.